January 09, 2017 – Ninkii weerarka gaariga xamuulka ah ka fuliyaya magaalada ay falastiiniyiinta leeyihiin ee ay Yahuudu xooga ku haysato ee Qudus ayaa la sheegayaa in ninkaasi lagu magacaabijiray Fadi Qunbar da’diisu ahayd 28 jir.
Ninkan ayaa gaariga nuuca Xamuulka qaada ah waxa uu ku weeraray askar Yahuud ah oo taagneed degmada Armon Hanatziv ee magaalada Qudus, waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay weerarkaasi gaariga loo adeegsaday ayaa waxaa ku dhintay 4-askar oo sadex kamid ah ay haween ahaayeen, waxaana sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay 17-qof oo kale kuwaa oo qaarkood dhaawacyo culus qabaan.
Ciidamada Yahuuda ayaa markii dambe toogtay Ninka Falastiiniga ah ee gaariga ku dilay Askarta Yahuuda, waxaana ay ciidamada israa’il xireen xaafada uu magaalada Qudus ka degnaa ninka weerarka geystay.
Ra’iisalwasaaraha dalka Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ninkii weerarka ka gaystay magaalada Qudus uu taageersanaa kooxda la magac baxday Dawladda Islaamka ee Daacish.